तक्मामा नेपाली भूभाग छुट्नुको कारण गुप्तचरसँगको मन्त्रणा त होइन् ? « Janata Samachar
काठमाडौं । पुर्व गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वितरण गरेका मानपदवी तथा पदकको बीच भागमा रहेको नेपालको नक्सामा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको भूभाग छुट्नुको कारण विदेशी गुप्तचरसँगको मन्त्रणा हुनसक्ने आशंका गर्नुभएको छ ।
पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको नेपालको चुच्चे नक्शा गायब गरी तक्मा वितरण गरिएको प्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला नेता रावलले पनि त्यसको विरोध गर्नुभएको हो ।
तक्मामा नेपालको नयाँ नक्सा नराखिएको भन्दै रावलले यसो गरिनुको पछाडि विदेशी गुप्तचरसँग मन्त्रणा गरिएको हुनसक्ने अनुमान गर्नुभएको हो । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै रावलले यसबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गर्नुभएको छ ।
रावलले लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रियताको भावनाका साथ प्रदान गरिने तक्मामा अंकित नेपालको नक्शामा दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नराखिनुको आशय के हो ? प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त जवाफ दिनुपर्छ । यसो हुनुको कारण कतै बालुवाटारमा प्रमको विदेशी गुप्तचर समेतका व्यक्तिहरूसँगको मन्त्रणा त होइन ?’